Phupha ngekhamera yoKhuseleko Discover ➡ Discover Online Online ➡️
Phupha ngekhamera yokhuseleko
Iikhamera zokujonga zisetyenziselwa ukurekhoda okwenzekayo kwindawo ethile, umzekelo emnyango wendlu okanye kwindawo kawonkewonke. Enye into, oku kuyaboyikisa abantu abanokuba zizaphuli-mthetho. Kwelinye icala, ukurekhodwa kwevidiyo kunokunceda ekuchongeni aboni.
Akukho mntu ubuza inyani yokuba kuyakhanya xa siqhuba ngokukhawuleza emotweni. Nangona kunjalo, ukubekwa kweliso kwevidiyo ngokupheleleyo kuyimpikiswano yezizathu zokukhusela idatha. Kwaye kwindawo yakho yabucala akufuneki ujonge abanye, ngakumbi ngaphandle kolwazi lwabo.
Iphupha malunga nekhamera yokujonga lingenza umntu oleleyo azive ekhuselekile. Usenokungasiboni isixhobo njengokhuseleko konke konke, kodwa njengendlela yolawulo. Emva koko unokuziva ungonwabanga. Iimvakalelo zakho zifundisa kakhulu ukutolika iphupha.
1 Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolikwa ngokubanzi
Ikhamera yokujonga iqulethe zombini njengesimboli sephupha. iinkumbulo ezigciniweyo Ukongeza ekuziqheliseni namava athile. Ngokwenkcazo yephupha, ukurekhodwa kwekhamera kubonisa iziganeko ezingavumeli umphuphi ukuba aphumle. Ukujongana nexesha elidlulileyo, nangona kunjalo, kuthintela isenzo esijolise kwikamva.
Ke ngoko, iphupha kufuneka liqondwe njengesimemo sokujonga umfanekiso omkhulu kumgama wendawo kunye neemvakalelo. Ngale ndlela, uvavanyo olunenjongo ngakumbi lunokufikelelwa.
Kwitoliki ethandwayo yamaphupha, ikhamera yokujonga ithetha mampunge. Ingabonisa ukuba umntu othile utsalelekile kweli phupha kwaye uyalijonga. Kwakhona, uphawu lwephupha ngamanye amaxesha luyisilumkiso ngokuchasene nokuzama ukukhohlisa. Ukuba umntu oleleyo unephupha lokuba ikhamera yevidiyo imjongile, kunokwenzeka ukuba ujongana nabahlobo abanyanisekileyo.
Kwi "khamera yokujonga" isimboli yephupha, inkalo ye IMachtausübung Indima ebalulekileyo. Ngokufanelekileyo, umntu ophuphayo ukwisikhundla esiphantsi kubomi bokwenyani kwaye unengxaki yokuziphatha komntu onegunya. Iphupha elo lifanekisela intlonipho enyanzelekileyo kwaye livakalisa ukungonwabi ngenxa yokungakwazi ukuzikhusela. Ngokwenkcazo yamaphupha, uphawu lwephupha "ikhamera yokujonga" inokubonisa imikhwa emibi ebeka ubomi bamaphupha.
Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolikwa kwengqondo
Ikhamera yokujonga ifanekisela njengophawu lokuphupha. imemori yalowo uleleyo. Amava agcinwe apho kufuneka asetyenziswe ngcono. Ngengqiqo yokutolikwa kwengqondo yamaphupha, iphupha sisicelo esivela kwi-subconscious sokujongana namava adlulileyo. Ngaphandle koko, baya kucinezelwa kwaye umntu ophuphayo akazukufumana sibonelelo kubo.
Ukujonga imeko okanye ikhondo lesenzo kwilensi yekhamera nako kuyadala umgama. Umfanekiso wephupha wenza kucace kumntu oleleyo ukuba kufuneka aqwalasele kwaye avavanye iimeko ezithile okanye indlela aziphethe ngayo ngendlela engathathi cala. Ngokutsho kohlalutyo lokulala, ikhamera yokujonga ivumela umbono opheleleyo wephupha. Ngokwesiseko soku, umphuphi unokugweba ngento angathanda ukuyigcina kwimemori yakhe kwaye kwenzeka ntoni kuye.
Ukutolikwa kwamaphupha, owona mxholo wephupha uthathe isigqibo. Ukuba umphuphi ngokwakhe ufotwe yikhamera yokujonga, uphawu lwephupha licinezela Uloyiko lolawulo ngabanye abantu okanye amaziko. Ephupheni, i-subconscious evukela ngokuchasene nokuphulukana nokuzimisela. Ukuba iphupha lisebenzisa ikhamera ukubek 'esweni, libonisa ngokohlalutyo lwamaphupha isidingo sokusebenzisa amandla kunye nokulawula iimvakalelo zikabani.
Uphawu lwephupha «ikhamera yokujonga» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba elidlulayo, uphawu lwephupha "ikhamera yokujonga" uphaphile Mhlawumbi kukho izithintelo ekukhuleni kwengqondo ezenza ukuba kufuneke ujonge imeko engaphandle.